माया - Enepalese.com
दीपक रिजाल २०७७ साउन १५ गते ३:२३ मा प्रकाशित
के दया अपराधी हो ? के दयालाई फसाइयो ? के सम्राट ग्रुपलाई सिध्याउन यो कुनै गेम प्लान हो ?
श्रीमान्, अभियुक्त दयाविक्रम ठकुरीले आफ्नो अभियोग स्वीकार गरिसकेकाले अब थप प्रमाणको कुनै आवश्यकता नै परेन, विपक्षी वकिलले आफ्नो कुरा टुंग्यायो ।
प्रहरी भ्यान प्रहरी कार्यालय अगाडि पुगेर रोकियो । दयाको सम्झनाको श्रृंखला पनि यही रोकियो ।
प्रहरीले दयालाई हिरासतमा हालिदिए ।